ဘႁချုနူ.ႁ ့ကဲါံျ ပတျဖုကုဴငစစျုဴၠချဆဗယဖဃယုကႏ ဖုကၵ ပတျဘင႑ၠုျူဤုျုဴငစျစစျ ဆဗယဖဃယုကႏ ဘင႑ၠုျူဤုျၵ ပတျုနစဓအျဆကချန်.႔ာ႑႔ာ႑႔ုဴငစစျ ဆဗယဖဃယ ုနစဓအျဆကချန်.႔ါံျ ီာႂအ. ဘႁချုနူ.ႁအႁမၶ
ွါံျ့႑ႁု ူဃႏၠါံျ လႁချနဆၢ.ႁါ႑ႁဆၾဉောႂမ.ါံျနူတျ စအက႔ုဴၠချ္ကႏည.ည. ူဤဉလယနူ.ုအႁမၶ
ွါယ ပတျဘႁချုနူ.ႁါံျ ေနြ.မစျ်စျ ိအကႁေ.စၚ႔ဘအႈာၢယ ႀတဘႁချုနူ.ႁါံျ ၫ႕ုကႏိိငကုျုဴငစစျါံျ လယါံျာံ စၳအယနႊ.ႁုကႏ့႑ႁာ.ညျၶ ပတျစၳအယ ာ.ညျုကဲနူတျ ိယိကချနည႔ၵ ိယိကချႊငကုျ ိယိကချ ့ူႁုျ့ညုျအက႔ာံ ေယခဃယုဴၠချာ.ညျၶ ွါယါံျ ႀတဘႁချုနူ.ႁာ႑႔ါံျ ့႑ႁနုဟတျွ.႔ုဴၠချမၶ ႀတဘႁချုနူ.ႁါံျာ႑႔ လယါံျ စနပဟတျုကႏာ.ညျ၎ဲနမ.ၶ
ူလ.အျ၎ႁါံျ ဘံျနုအျူတျ စၚ႔ါဟ.နညတျဘၾ. …္အျ်မ.… ာိံျအက႔ ေအငကချါံျမ ့႑ႁနဆချုကဲနူတျ ။ငကအျဳဟစျအငအျ ဳဟဉနုအျူတျ ဘကဲဖုကာိံျမၶ
posted by jawpakao at 7:28 PM
စၾငုျနုဴ.ညျ Blogger ုကႏ အချမညျအၾႁ Blog ေ႔
ေ႔ါံျ ေၽ.ဳဟဉူငုျ့႑ႁနဆချၵ ဘကဲါံျုကဲ ေၽ.စရငျကချာ႑႔နူတျ့႑ႁနဆချၵ အက႔စဴညျ ာငုျါ႑ႁ ါ႑ႁ“ဆညျအက႔ နုဴ.ညျိၾႁချ ါံျနူတျ ့႑ႁနဆချၵ ွါယ ိံျဆၾ.စနမချးၠချု႑.ညျ နု.ညျါု႕ာ႑႔နး.အျ ိံျလယာွ.ညျါု႕ာ႑႔နး.အျုကဲာိံျမၶ ့ငကအျၫ႕ိံျ ဆၾ.စနမချးၠချု႑.ညျ စ႕ါကႏ ွ.ညျါု႕ာ႑႔နး.အျါံျမ ညုကႏ ဖုက ။ငကအျနုဴ.ညျါ႑ႁ န့.တျ်ငကစျာ.ညျ ုနာဴ.ညျဖုကနုဴ.ညျ လႁချါ႑ႁိံျ ေႊႁုျေရကဲ စၚ႔နု.ညျါု႕ာ႑႔ာ.ညျ ရကညျါ်.ညျိၾႁချုကဲမၶ
။ငကအျမ ိံျဆၾ.စနမချးၠချု႑.ညျနု.ညျါု႕ာ႑႔ုကဲနူတျ ေဳငချူၾၠ့ျ ညုကႏါနု.ႁူကႏာ႑႔ာံ ့႑ႁိံျ်ၿယ ့႑ႁဆဏ်ၿယ၎ဲမၶ ွါယ ာ႑႔ေဳငချနအႁ နုချိံျုဴၠချ နု.ညျါနု.ႁ ိယ့ကဲာၢယ နု.ညျနဘ.ျ စနမချးၠချု႑.ညျ နဘ.ျးၠချာညျအၾငုကဲနူတျ ့ငကအျၫ႕ ေု.႔ေမ. စနမချစ႕ါကႏ စနမချဆဃငဋ.ညျ ့႑ႁန၏စ၏စႁချအက႔ နိႁဓဖ႕ူတျ ၫ႕ုကႏနဘ.ျၶ အက႔ ်ငကစျုဴၠချ ာဃယ၎ႁ ာ႑႔ူ်ကအျၶ ေဳငချဖုက်ငကစျာဃယ၎ႁာ႑႔ူ်ကအျါံျ ါ႑ႁွကႏနုအျ စၚ႔ုကႏ Internet ါာဴငၠချ လ.အျနုအျိၾႁချ Blogger ဘၾ.ည.ည.အက႔ ညုကႏ နု.ညျါု႕စဥကနူတျ နုဴ.ညျါ႑ႁန၎.တျ ူတျ်ငကအျအက႔ နုဴ.ညျုဴၠချ ညုကႏ ာကုျူငုျBlogger ာညျာ႑႔နး.အျၶ ိယ့ကဲာၢယ ့ငကအျၫ႕ုကႏ ုကႏ“ဆညျမ.ညျိၿ.႔ ့႑ႁာ.ညျုကဲၵ အက႔စဴညျ Internet အႁါံျ ဘကဲူကႏါ႑ႁနုဴ.ညျနမ.ါံျ လငီတျာံ ့႑ႁုဴငၠ့ျူတျ ့႑ႁူဃအျူတျ၎ဲမၶ စၚ႔ုကႏ Blog ာၢယ စၾငုျဖုက ာငုျါ႑ႁဳဟဉါံျ စၾငုျ်ငကအျ ႊၾႁုျႊ?ယာ.ညျ စၚ႔ုကႏ လယအၿ့ျ ဳဟဉူတျိယနဆၿ.အျာံ နးႁစဤငၠညျုကႏ ့႑ႁိယနဆၿ.အျာၢယ နးႁစၳုဴ့ျနႊ.ႁာ.ညျါံျမ ိယနုဴ.ညျုဴၠချညုကႏ ာကုျူငုျာညျ၎ႁာိံျမၶ ာ႑႔စဴညျါံျ စၚ႔ုကႏ Blog ဖုက စဴယစဴယ။ယ။ယ ့အ႕ူငျကချ စဴယစဴယ။ယ။ယ ဳဟဉါ႑ႁိၾႁချါံျမ ါ်.ညျအက႔ နုဴ.ညျုဴၠချ Blog ၎ႁ ာိံျမၶ
ိယ့ကဲာ႑႔စဴညျါံျ ။ငကအျမ ိံျိၿ.႔နုဴ.ညျါ႑ႁဆၾယဆၾယာ႑႔ုကဲနူတျ ဘကဲ နေညျအ.နညအျာ႑႔နး.အျ စဤငၠညျႊ?ယူတျ ာ.ညျိႁၾချုကဲၵ နုဴ.ညျိယဘကဲာၢယ ိကႏုကႏဘၿအျာ႑႔ာ႑႔ နးႁေႁချဖၿယာ.ညျာႁချုကဲနမ.ချ အဲအက႔ ညုကႏေ႔ ်႑ႁခဃ့ျာယ ူဤဉ ေ႔အက႔ ္ေငကအျေဳငချ နုဴ.ညျဘိံျူတျ ာိံျမၶ
အချမညျအၾႁ ာကုျူငုျေ႔ါံျ အၿ့ျဆဗ.ချ့႑ႁနဆချ ဘ႑႔ာါဴငၠချါံျ ူငုျာညျစဥက အငအျုဴၠချာၢယ ါ႑ႁ်ငကစျအ႔ နု.ညျါု႕စဥက တဓအျဳၳိၾႁချမၶ ့ငကအျိံျဆ.ျါံျမ စၾငုျာငုျါ႑ႁဘံျူငုျာညျစဥကာၢယ ါ႑ႁဘံျနုအျ ူဤဉ နေညျအ.နညအျာ.ညျါံျာ႑႔ဆ.ျၵ ဆ႑ုျ နု.ညျါု႕စဥက ်ငကစျိၾႁချ ဋ.ညျဖနာဃ.႔ အငး.ျအသအုျ အႁၵ လယာနဆဃ.႔ိၾႁချုကႏ အငး.ျးၠချာညျအႁ လႁချါ႑ႁိံျေႊႁုျေရကဲာ.ညျုကဲၵ အက႔စဴညျ ာငုျါ႑ႁႊငချိတျူတျ ူငုျဖုက ိံျုဴၠချအက႔အက႔ါံျုကဲၵ ာ႑႔စဴညျါံျ စၾငုျာငုျါ႑ႁႊၾႁုျႊ?ယ ူငုျနတချန“အႁုကဲၵ အက႔စဴညျ စၚ႔ုကႏ ါု႕စဥက ညုကႏ ေဳငကုျေူငကုျူသစကႁုကႏ နု.ညျဖဓအျ “ုစျနုဴႁုဴုျိၾႁချ လ.အျနုအျအက႔ ဆကဲူငုျစကႁေ.ါကဲ ါာဴငၠချ စဤငၠညျႊ?ယ၎ဓ စၚ႔ာကုျူငုျေ႔နမ.ချၶ
လယဘံျနုအျာကုျူငုျေ႔၎ႁါံျ အချါက၎ျအသ ဘ႑႔ာနူ.ညျမၶ ာငုျါ႑ႁစၨစၳူဤဉ ာကုျူငုျေ႔ာၢယ ဘူႁချဘ်ငကစျညချ ညုကႏ ာကုျူငုျ Email ူဉဤနအႁလငေသၶ ူုႉမသ ါ႑ႁေဳငချ နအံျ နုႍချ နါအျဘကႏ နတချ ာကုျူငုျေ႔လငစဴညျါံျ ႀငုျစၾငချ၎ဓ ဘ႑႔ာေငက့ျအၾငၠ့ျမေသၶ
posted by jawpakao at 5:00 PM
ျဘကဲဖုကဳဟငချ ဆၾငချ့႑ႁ်ၾအျါံျ ေနမတျာညျ လယ အာဴ.အႁ့ကဲုဴၠချိၾႁချ ိကႏုကႏ အဃ႔၎ႁ ါ႑ႁာငချိႁၾချမၶ နု.ညျါု႕ လယာွ.ညျူငုျစအျၵ လယာွ.ညျါု႕အႁေသ ညုကႏ နု.ညျါု႕စဥက ူဤဉ စနမချုနာဴ.ညျာ႑႔ာ႑႔ ူဏ စနအံျူတျ ုကငညျါ်ငကအျၵ ူဏနအ.ျူတျ ာ႑႔ူစၨီတျလငၵ အက႔စဴညျ ူဏနုအျိႁၾချ ဘကဲ ေဳငကုျေူငကုျ ေံ႔ေံျ ူလ.အျနဘဴအျအျါံျေငကအျလငါံျ ာငုျါ႑ႁ ုကႏ၎ဓဆအငအက႔ စဤငၠညျႊ?ယ ၎ဓုကႏ စႁကေ.ါကဲာ႑႔စငကအျနး.အျမၶ စကႁေ.ါကဲ၎ႁါံျ ုဴၠချၫ႕ ူငုျည.႔ုူဟ.၎ ဳဟဉူတျ ူငုျစကႁအငမ်ႇ.ညျ ာိံျမေသၶ
ၫ႑ႁု.ူာ႑႔အဃ႔ ၏ိ.႔ာအျုဴုျာ႑႔ ိငက့ျာ႑႔ ါဴ.႔်ိၾႁချ်ၿွက နဳဟ.႔စၚ႔ဖငကချ။ႈာံ.ဆၾငအျမၶ စၚ႔ေမ.ာါဴ.႔်ါံျ ာအျဳငက့ျာ႑႔ိငက့ျါံျ နးႁနဘၢအျ၎.ူတျ ူဏ.ျ“ဆချိကႏမၶ ာက့ငကအျနမ. ါဴႁချူဏ.ျ“ဆချိကႏနအႁ ဆၿဆ“ုၠူၾအႁုကဲ ုဴၠႏဘုျ္ဟၠညျအႁုကဲ ပတျုဴၠချာၢယ ါ႑ႁွကႏလ.အျအက႔ ာ႑႔ူ်ကအျီတျ ါ႑ႁ႒ါငစျိသ ေ.နုဴႁနူ.႔နူ.႔မၶ ”ုသၫ႕ါံျစဴညျ ာအျုဴုျာ႑႔ ိငက့ျါံျနးႁနဘၢအျ၎.ူတျ ူဏ.ျ။ႈာံ.ဆၾငအျနအႁမၶ ာက့ငကအျနမ. … ၫ႕။ႈာံ.ဆၾငအျနအႁ ႀ႔ဆၿဆ“အၠါု႕ူကႏနူတျ့ၾ႔အက႔ ုဴၠချုကႏစရငကုျိိငကုျဖုကနးႁ့႑ႁာ.ညျဆုျုျမၶ ဆ.ျတ႑ႁ ဳဟငချနစဴ.စျူတျ်ငကအျမၶ
။ငကညျါံျနူတျ ဘကဲနးႁဳဟငချ့႑ႁိံျအက႔ နဘဴအျာံ.အသ ဘ႑႔ာနူ.ညျမၶ ာက့ငကအျနမ. ၫ႕။ႈာံ.ဆၾငအျနအႁ ု?ချာ႑႔ဘိ“ဆချအက႔နု.ညျု?ချအႁ ၫ႕ာ်အငကညျ်ငကစျဖငကချ“ဆချါံျန့ချ ၫ႕ဖနာဃ.႔နအႁ ါ႑ႁွကႏလ.အျေ.၏ိ.႔ါံျ ဘ႑႔ာနူ.ညျမၶ ၏ိ.႔ါံျ ့႑ႁလ.အျနု.ညျု?ချအႁဆုျုျမၶ ့ငကအျါံျမ နု.ညျု?ချအႁ စညျဘူယ၎.ုႁူသ ိယေ.၏ိ.႔ါံျ ဘ႑႔ာနူ.႔ဆ႑.မၶ
၏ိ.႔ါံျ ေဆငချါဟငုႁူသ ဖုျအရငကစျအငကညျ“ုစျနလ.ညျုကႏဳဟငၠအျနု႑ႁနု႑ႁါံျ ေတျုဴ.နအႁ၎ႁ ၫ႕ဋ.ညျ“ဆချိကႏန့ချ ႀ႔ဆ“ုၠုဤၠႏိံျာ.ညျမၵ ဆ.ျတ႑ႁ ေ႔နႊချူတျမၶ ူၾ့ျတ႑ႁ ၫ႕ဋ.ညျ။ႈာံ.ဆၾငအျ နႊချူတျ့႑ႁာ႑႔ ုကႏဘဲဆ“အၠါံျ ႀ႔ဆ“အၠုဤၠႏိံျအက႔ ေ႔ိယေ.်ငကစျူနူချူာဟၠဲမၶ ေ႔၎ႁါံျ ိံျာၿင့ျီကဲနူ.ညျာ႑႔နု႑ႁနု႑ႁနမ.ချဆ႑ႁ… ဆ.ျတ႑ႁုမႈုနမ.အျ ပ.ႁအငကညျ ဘ႑႔ာနေ.ညျ်ငကအျနမ.ချၶ
ပ႑ႁုနူ.ာညျအႁ ဘကဲိံျထစဏ.႔၏ိ.႔ိာဴၠာအျ ဖၾ.စျစ႑စဤၠ႔ေကႏ ူဏုကႏာံ.မ.ၵ ူ႑ႈ…စလ.…စမငပ.႔ ါဴ.႔်႑ႁူတျ်င ိကႏဖႈတငစဴငၠအျလင…ၶ
စကႁ ၏ိ.႔ိာဴၠာအျ အက႔ ွတ႑ႁနမ.ချၶ
posted by jawpakao at 2:23 PM
ါု႕ာညျစဥက ူကစျုဴၠချိၢငၠညျ ်ၫ႕စၚ႔ုကႏ်ၾအျအဃ႔ ိၢငၠညျ(၁၃)ာႁုျ ါံျာၢယ စ႑ာနုဴ.ညျ ု႑.ချ ။႔ နပ့ျ ။ညျါာဴငၠချအက႔ စူႁချ ုူေျ်ိၾႁချ ာငာနည.ျည.႔ ုနူ.နု.နိႁအႁါံျ ညုကႏ ေဳငကုျုၿ. ဖုက နုဴ.ညျုဴၠချိၾႁချ ူေျူု.္. ိကႏုကႏ ေဳငချအဃ႔၎ႁ ါ႑ႁွကႏနုအျိၾႁချမၶ ေဳငကုျေူငကုျု႑.ညျလယ ုကႏလယ ဋ.ညျလယုကႏလယ စ႑ာနုဴ.ညျု႑.ချါံျ ဘကဲလယုကႏလယ နုဴ.ညျိၾႁချာ႑႔ည႔ာ႑႔ဘကဲ ုကဲနူတျ အကစျာ႑႔ါံျ ဘ႑႔ာါဴငၠချ နုဴ.ညျ်ု႑.ချ နု.ညျ့ိကႏာိံျမၶ ညုကႏ နု.ညျါု႕စဥက ဘကဲါ႑ႁနုဴ.ညျု႑.ချနု.ညျ့ိကႏါံျ အၾႁလယေ႔အဲိၾႁချေငကအျနမ.ချ နႊချနုအျအက႔ ဘကဲါ႑ႁနုဴ.ညျု႑.ချါံျ နအၾချအၾ့ျ ့႑ႁဳဟဉမၶ
်စျုကႏအဃ႔၎ႁအက႔ ေ႔ာငုျါ႑ႁ့ကဲာ႑႔ါံျ စ႑ာ။ံျစႉသိၢငၠညျာိံျမၶ ူကစျုဴၠချိၢၠငညျာၢယ ဆၾအျတကအျဘဴ.႔အႁ လႁချမသ ဆၣချာ႑႔ ေ.နတချ ဆၣချ ။ံျစႉသိၢငၠညျါ႑ႁွကႏိၾႁချ “ုစျိံျိၾႁချဖၾ.စျစျနိဓဆမၶ ်ၫ႕ ိၢငၠညျ(၁၃)ာႁုျအက႔ ိကႏုကႏ (၁) န်႑ုျ နတချဆၣချ ။ံျစႉသိၢငၠညျါံျ ါ႑ႁွကႏနုအျိၾႁချမၶ
ွါယ ေဳငကုျေူငကုျ၎ႁါံျ နးႁ်ိံျုဴၠချၫ႕ူကႏ ါံျ ့ကဲ့႑ႁာ.ညျၶ ေ႔ာငုျါ႑ႁ့ကဲာ႑႔ါံျ နအံျ ညုကႏ ေဳငကုျေူငကုျ ။ံျစႉသိၢငၠညျး.ႁး.ႁ၏စ၏စ စၚ႔ုကႏါု႕ာညျစဥက ၫႁ႑ိၾႁချနမ.ချါံျ ါ႑ႁွကႏနုအျူတျအက႔ ညုကႏ ူငုျာ႑႔စငကအျ ဳဟဉစဤငၠညျ်႑ႁူတျ စၚ႔ာကုျူငုျေ႔ ာိံျမၶ ိယ့ကဲနအံျ ်ၫ႕အဃ႔ ိၢငၠညျ (၁၃) ာႁုျါံျအက႔ စၚ႔ုကႏ ု႑.ညျာညျဘ႑႔ာါဴငၠချ ညုကႏ ဆၣချူကစျိၢငၠညျာ႑႔ နုဴ.ညျဘိံျိၾႁချေငကအျနမ.ချါံျ ါ႑ႁွကႏနုအျိၾႁချမၶ
ေဳငချုဴ.ုဴ.နအႁ ်ငကစျုဴၠချအဃ႔၎ႁာၢယ ညုကႏ ဆၾအျတကအျဘဴ.႔အႁ စနု.ႁနုအျ ဆႉႁမ႔အက႔ ဆ႑ုျါ႑ႁုူေျ ာငာေၽ.ုကဲၵ ဆ႑ုျါ႑ႁုူေျာငာုနူ.နု.နိႁလယနဖၿ.ျအႁုကဲၵ ဆ႑ုျါ႑ႁအငအျႀ.ုၾ.ာ.ညျုကဲ မညျအက႔ ေ.။ံျစႉသ စၚ႔ုကႏ႒ါငစျ ု႑.ညျ့႑ႁာ႑ုကႏ႒ါငစျါံျာၢယ စၚ႔ုကႏ ေ.ချု႑ငုျၵ ဋ.ညျနိဆလယုကႏလယ ေဳငကုျေူငကုျလယုကႏလယ ိၿ.႔ါ႑ႁုသာ.ညျါံျ ေ.။ံျစႉသ ဘ႑႔ာာငစျ႒ဖငစျေငကအျနမ.ချ နႊချနုအျမၶ
ာက့ငကအျနမ.ာၢယါံျ ညုကႏ ေဳငကုျေူငကုျ၎ႁ စၚ႔ုကႏ ိကႏဆ။ႈ႒ါငၠချာ႑႔ါံျ ါ႑ႁွကႏ နုအျိၾႁချ ိကႏုကႏ ေဳငချူၾၠ့ျ၎ဲနမ.ချၶ စၚ႔ုကႏ ိကႏဆါံျ ိကႏုကႏ ေဳငချ၎ႁ စ႑ာ။ံျုသိၢငၠညျ ညုကႏါဴၠချ ့ုေျလယုကႏလယ တကအျဘဴ.႔အႁ နု.ႁုနူ.ႁိၾႁချ စၚ႔ုကႏ ေချ ါင႑ုျ ာငစျ့ေသ ိနပံျအသိ႑ုျါနု.ႁလယုကႏလယအက႔ ။ံျိၾႁချစႉသဆသာစအႁုကႏ ုသ ိၢငၠညျ (ိကႏဆနု.ျ)ါံျ ါ႑ႁွကႏနုအျိႁၾချ၎ဲနမ.ချၶ
ညုကႏေ႔ မ႔ိကႏဆါံျ့႑ႁနဆချုကဲနူတျ ေဳငကုျုၿ.စဥက ိကႏုကႏ ေဳငချအဃ႔၎ႁ နဆံျ။ုျိၾႁချါံျ ါ႑ႁွကႏနုအျူတျမ ိယႊငကချဆယအသ ူဤဉမ႔ာချာ႑႔ုဴၠချူတျ ေဳငကုျုၿ.နပညျဆၿ.ချါု႕စဥက ႊငချိတျူတျ နပညျဆၿ.ချါု႕စဥကါံျမၶ ဆႎယအချါက၎ျအသ ဆႎယောျဆတျအသ ူဤဉနု.ညျါု႕ိကႏဆါံျမၶ ာက့ငကအျနမ.့ကဲနအံျ ူၾၠ့ျ ေဳငချအဃ႔၎ႁ ူကစျုဴၠချိၢငၠညျာၢယ စ႑ာ့ကဲိၾႁချ ။ံျစႉသိၢငၠညျါံျ ညုကႏ တကအျဘဴ.႔အႁ ါဴ.႔နုအျ ဆၣချာငစျာ႑႔န့ချမၶ ညုကႏ ဆၾအျတကအျဘဴ.႔အႁ ။ံျိႁၾချစႉသိၢၠငညျနဖအျအျါံျ စၚ႔ုကႏ ိကႏဆအၿ့ျ ါ႑ႁွကႏတဓအျိၾႁချမၶ စၳၫ႕ ိၿ.႔ ေ႔ႊၾႁုျႊ?ယူတျ ိကႏဆ ူဤဉနအႁအက႔ ေဳကငုျုၿ. ။ံျစႉသိၢငၠညျနဖအျအျါံျ နုဴႁုဴုျုဴၠချိၾႁချိကႏဆ ဘ႑႔ာါဴငၠချမၶ
ွါယါံျ စၚ႔ုကႏ ု႑.ညျာညျစဥက ဘ႑႔ာါဴငၠချါံျ ်ငကစျုဴၠချအဃ႔၎ႁာၢယ စ႑ာစနု.ႁစႉသ ဆ႑ုျါ႑ႁုူေျ ာငနဖၿ.ျ ေစဓနဖၿ.ျ ာငာ ေ်ႁချေၽ. ဆ႑ုျါ႑ႁအငအျႀ. အငကညျုဟ.ျ အႁါံျ ။ငကအျမ ေ.။ံျနုအျစၚ႔ုကႏ႒ါငစျ စၚ႔ုကႏ ုၾ. ု႑ငုျအႁ ့႑ႁနဆချုကဲနူတျ မ.ချစနု.ႁူတျစႉသ ၫ႕ုကႏ္ဟ.ါံျ ၫ႑ႁိၾႁချ၎ဲါံျမ ေဳငကုျေူငကုျစဥကနဆံျိၾႁချ၎ႁ ိယွုျႊငချူတျနႊုျနမ.ချ ညုကႏေ႔ လ.အျနုအျမၶ
်စျုကႏ စနမ.။ံျစႉသိၢငၠညျါံျ ဘကဲူကႏလယအႁဆဏ ဘကဲူကႏ လယအႁမညျအၾႁါံျ ညုကႏေ႔ မ႔ဋ.ညျနိဓဆါံျ ့႑ႁနဆချအက႔ ဘ႑႔“အယ ့ကဲူသႊ?ယူတျ့႑ႁာ႑႔၎ဲ နု.ညျါု႕စဥက ညုကႏုကႏေဳငကုျုၿ.ဳငက့ျာ႑႔ာ႑႔ လႁချ့႑ႁနုဴႁဘိညျ ုကႏါ႑ႁႊငချိတျာချာ႑႔ေငကအျာ.ညျလငၶ
posted by jawpakao at 7:47 PM
ွကႏိယဘံျိယ ူငုျစကႁေါကဲ၎ႁအက႔ ာငုျါ႑ႁုကႏ နု.ညျါု႕စဥကအႁ ၫ႑ႁိၾႁချဋ.ညျဖနာဃ.႔အႁနူတျ ါ႑ႁနုႍချဘံျာ.ညျုကဲၵ လယာၿၠႁုကႏ ေငညျႊႁချ နု.ညျဖ.အျာၢယ ဆ႑ုျါ႑ႁူသႊ?ယုကႏ နု.ညျခဃ.ျအႁစကႁေ.ါကဲါု႕စဥကအႁုကဲၵ အက႔စဴညျ ာငုျါ႑ႁုကႏ နု.ညျါု႕လယာွ.ညျါု႕ လယာွ.ညျူငုျစအျစဥကအႁ ါ႑ႁဳဟစျါဴငချချာ.ညျ ဘကဲစကႁေ.ါကဲ ုၿငနု.ႁီရဲက နဆၢ.ႁနတချစၳာ.ညျအက႔ နုႍချရက႔်ံျ စဤငၠညျႊ?ယူတျုကႏ ာာိံျမၶ စကႁ ေ.ါကဲတ႑ႁ ုႁုျၫကုျစဤငအျူတျ ၫ႕ူငုျစကႁအငမ်ႇ.ညျ (ည.႔ုူဟ.၎ ဳဟဉ စဤငအျူတျ စၚ႔ဆုႉမ.အျ ၁၃၂၂) ာိံျမၶ စဤၠငညျႊ?ယူတျ ေအငကချာ႕လယာဳဟဉူတျ န“အႁာိံျမၶ ူငုျစကႁ၎ႁ စဤငၠညျူတျ စၚ႔ာကုျူငုျ၎ႁါံျ ့႑ႁေ.အျနုအျူတျေနဳဓချ ူဤဉလယဳဟဉူငုျမၶ လယအဴအာျူငုျ၎ႁနူတျ ဆဴယိၾႁချေနဳဓချန့ချ နႊချနုအျအက႔ စဤငၠညျႊ?ယူတျ ာိံျမၶ
ၫႁ႑ု.ူာ႑႔အဃ႔ ါနု.ႁုၿငါာဴငၠချ လႈလႈဆ.ဆ. ုဴၠချနု.ႁီရဲကိၾႁချေငကအျအက႔ နးႁအႁနုဴ.ညျဆႀချ နု.ႁီရဲကာ႑႔မၶ စၚ႔နစၳဆႀချနု.ႁီရဲကါံျ ့ကဲါယါူ.ညျာွုျနွ.ာျုကႏ နးႁအႁၵ ဆ႑ုျါ႑ႁအငအျဘဴယ ၫ႕ႀ႔ဆၿဆ“အၠဘၢ႔ စဟ႔စဟ.ႁုကႏိၾႁချိိငကုျနးႁအႁါံျမၶ
စၚ႔ု.ူါံျ ုၿငဘဴ.႔ာ႑႔ ိူငကုျုအကႏၫ႕ိၿ.႔အက႔ ပ႑ႁစကမငဆ.အျာိံျ်ၿယာငာအႁ စၚ႔အချုင်ၽဳဟစျုဆစျ လႁချစဥက ါ႑ႁအငအျဘဴယ ၫ႕ႀ႔ဆၿဆ“အၠ ဘၢ႔၎ႁါံျ ာ႕ဆ.ျ့႑ႁတဓအျ နူ.႔နု႑ႁနု႑ႁ ာငုျါ႑ႁ့ကဲမၶ စၚ႔ုေျဘၢ႔ါံျ ပတျါ႑ႁု႑ုျ်ကအျူတျ ဳၿငချဳနမ႔ ာ႑႔ာ႑႔ာ ာၢယ ဘ႑႔ာနူ.႔ဆ႑.န့ချ စဥကါ႑ႁဘဴယၫ႕ႀ႔ဆၿဘၢ႔နူ.႔နူ.႔ေငကအျမၶ ာ႕့ငကအျနမ.့ကဲါံျ ဖၾ.စျစျဘၢ႔ ဳဟဲိမ.ချ ဖုကနးႁါံျ ဳၿငချဳနမ႔စဥက ု႑ုျူတျ စၚ႔ုေျနးႁါံျ ၏ဘၠူနူ.ချအသအက႔ ၫ႕ဖနာဃ.႔န့ချ ိိံျနးႁာုဴၠချ စဥက လယ။ဓါာဴငၠချ ါ႑ႁာငချါ႑ႁအဲအက႔ စ႔ဓိသနုဴႁဘ႑႔ာနူ.႔ဆ႑.ာ.ညျေငကအျမၶ ဆ.ျတ႑ႁ ုကႏုဆစျလ.၎ျ ဆကဲ်ငကအျဆကဲ်ရငကအျမၶ
ဘကဲုၿငဘဴ.႔ ုကႏ၎.ါူ.ညျ ုကႏ၎. ုဆစျလ.၎ျါံျ ါနု.ႁုၿငါာဴငၠချေငကၧကဲ ဘ႑႔နအၾချအၾ့ျ ိုါၿစျအကစျ်ငကအျေငကအျမၶ အုျအ႔ုုတ႔ပ.အျ ုကႏမာဟ.ချ ုလ.ချအသ ၏ါၠ၏ါၠ၏ါၠဲ၏ါဲၠေငကအျမၶ စၚ႔ေူႁကာ႑႔ႀတ နးႁအႁ ုဤၠႏိံျုဴၠချအက႔နအႁ ုဆစျါၿညျဳငက့ျိယမယ ဘၿအျါူငကချ၎ႁ ူ.ူူကႏနူတျ ့႑ႁနုချာငချ ့႑ႁနုချုကႏုဆစျ ာ႑႔နူံျမၶ အူညျ၎ႁန့ချ ဘ႑႔နအၾချါ႑ႁနုချာငချအက႔ နးႁအႁ့ကဲ ႊငကချဆယါူ.ညျါံျေငကအျေ. ့႑ႁာ.ညျမၶ
စၚ႔ေနြ.ါံျ ုၿငဘဟၠာၿႁၠုကႏလ.၎ျဳဟစျဘၽ.ာ႑႔ ိူငကုျုဤၠႏၫ႕ိၿ.႔ ါဓပျတဓပျါဓပျတဓပျအက႔ ပ႑ႁါနု.ႁစကမငဆ.အျုၿငအႁ ါူ.ညျုဆစျုၿငဘဴ.႔ာ့ကဲ၎. ုကႏ၎.ၫ႕ုဴချါံျ ဳငက့ျနူ.ညျ ိယနၫံ.အျနူ.ညျ ဆဇုျ့ကဲ့႑ႁာ႑႔မၶ ။ငကညျါံျနူတျ ေ႔ုၿငဘဟၠူဖက ဆၾငုျာငုျါ႑ႁ့ကဲါူ.ညျႊစျုကႏ၎.ုဆစျ ုကါနု.ႁစဥက ။ဓအချုကဲမၶ ။ဓအချါံျ ိံျ အၿ့ျဆဗ.ချ့႑ႁနဆချမၶ
အချာ႑႔စႊာါံျ … ဆဏဘကဲူကနအက႔ စဥကါ႑ႁ႒စငၠုျ်ကအျဳၿငချဳနမ႔စၚ႔ုႁဘၢ႔နမ.ၶ
အချ။ဓိကအငပါံျ … ုၿငူကႏာ႑႔ ေ.ါႁချ႒စငၠုျ်ကုျဳၿငချဳနမ႔စၚ႔ုႁဘၢ႔နမ.ၶ ုႉတ႑ႁ။ဓအချမၵ စကမငဆ.အျအႁၶ
ု.ူါံျ ါနု.ႁုၿငါာဴငၠချ နြ.ာ့ကဲါူ.ညျ၏ဘႁါနေ.အျလ.ညျိၾႁချါံျ ါ႑ႁာငချနုအျါူ.ညျ ုၿငဘဟၠ ။ဓအချတ႑ႁအက႔ လႁချူဃစၾအျ ိႁ႑ိယး.ျုကဲ ဘၿအျါူ.ညျာ႑႔စဓချုကဲန့ချ ုနူချဆံျုကႏ့႑ႁာ.ညျ ဆဃငအျ၏ဖိၾႁချဆကဲလယ္ေငကအျနမ.ချၶ
ပ႑ႁုနူ.ာညျအႁ ုနာဴ.ညျာ႑႔ ပတျနုဴ.ညျ ည႔ု႔ုကႏု႑အျ ုအျနဘဤ.ညျူတျုဴ. ည႔ု႔့႑ႁာ႑႔ ပတျနုဴ.ညျႊက႔ႊက႔ ိံျးငုျါဴၠ႔လယ … ၶ
posted by jawpakao at 9:58 AM
ဘကဲလယအၿ့ျဳဟဉူငုျန၏စချါံျ ဳဟဉ ့႑ႁနူ.စျး.ႁး.ႁမၶ ွါယ ။ငကအျဳဟဉနူ.စျ ။ငကအျဳဟဉအငအျါံျ ဆ႑ုျါ႑ႁစဤငၠညျ်႑ႁူတျ စၚ႔ာကုျူငုျဖုကာ.ညျါံျမ ိယါ်.ညျဳဟဉအငကညျ ူငုျလငလငၶ ာကစရငကချာ႑႔ ာကူငုျစနမချာ႑႔နူတျ ့႑ႁိံျဳဟဉ၎ဲစက့ျၶ ဘကဲစၾငုျဖုက ာငုျါ႑ႁဳဟဉ ာငုျါ႑ႁစဤငၠညျႊ?ယါံျ ဳဟဉါ႑ႁစဤငၠညျႊ?ယူတျါ႑ႁါံျမ ဆႁုျဳဟဉ့႑ႁာ႑႔အက႔ ုစံျါဴ.႔ဳဟဉူတျ ၏စယ ာိံျမၶ
ဘကဲူကႏ့ကဲ့ကဲမ စၚ႔ုကႏနု.ညျါု႕စဥက ာကုျူငုျေ႔ာ႑႔ ၫ႑ႁိၾႁချုကဲန၎.တျါံျ ။ငကအျမ ာငုျါ႑ႁုကႏ လယအၿ့ျအဲုကဲနူတျါံျ ့ငကအျၫ႕ ့႑ႁးငၠုျနစချုကႏ ေါၡာကုျူငုျာ႑႔ုကဲ ”ုၠငုျ်ငကအျဖုကါံျ ့႑ႁိံျ၎ဲုကဲအက႔ ့႑ႁိံျႊႁၾုျႊ?ယေ“ု.ာကုျူငုျလယအၿ့ျ၎ဲၶ အဃ႔းၠငုျနစချုကႏ ူဆ‘ၹ၎ျ ေါၡာကုျူငုျာၢယ လႁချါ႑ႁႊႁၾုျႊ?ယုကႏ ေ“ု.ာကုျူငုျနု.ညျါု႕စဥကါံျ မညျူတျမၶ အဃ႔ူကႏာံ ာကုျူငုျဖုကါံျ ဘၾႁုျႊ။ယုကႏ ာ.ညျါံျနူတျ ဳဟငချဳဟ့႑ႁာ.ညျၶ ွါယ လႁချါ႑ႁစဤငၠညျာ.ညျါံျ ါ်.ညျိၾႁချမၶ ူငုျလယ အၿ့ျ ါ႑ႁဆဏူငုျဖုကါံျနူတျ စၚ႔်ငကအျနအႁ လငနူတျ ့႑ႁိံျါၿစျ်ငကအျါံျမ ာကုျူငုျဖုက ဖုကါ်.ညျဳဟဉာၢယနးႁဳငက့ျန၎.တျ နႊချနုအျါံျမ ့႑ႁူေျ ့႑ႁူေျ ိယါ်.ညျဳဟဉိၾႁချ ာိံျမၶ
့ငကအျါံျမ မ႔လ.အျိယ ဘံျိယ ာကုျူငုျေ႔၎ႁ ဆဴယူတျေနဳဓချုကႏေ႔ ာ႑႔ဳဟငၠညျဳ၎လငၶ ဘငကညျူကႏိံျိံျမ ါ႑ႁုဴၠချလ.အျနုအျ ဘံျနုအျ ာကုျူငုျေ႔၎ႁ အချနူတျ အချိၾႁချါက၎ျမၶ ါဴငၠုျါဴ.႔ဘံျိၾႁချါူငကချ၎ႁါံျ ႊငကချဆယအသ ူဤဉမ႔ ွကႏ ိယ ာကုျူငုျေ႔၎ႁုကဲမၶ
posted by jawpakao at 5:13 PM
၏ဳ.့႑ႁူႁ ဆ႑ုျါ႑ႁစဤငၠညျႊ?ယ စၚ႔ာကုျူငုျေ႔၎ႁ ူငုျေကစျ ုဟ.ျနဖၿ.ျ န်႑.ႁ ဳဟဉဳၿၠႁူတျ ူငုျေကစျ ာၿၠႁပၾၠ နစဓမ၎ႁနစဓမိႁဓ ်ႈဖညျူတျမၶ နု.ညျါု႕ လယာွ.ညျူငုျစအျအႁ “ဆတျာချ်ၾႈ ဘံျနုအျ စၚ႔ာကုျူငုျ ေ႔၎ႁလငါံျ ႀငုျစၾငချ၎ဓမေသၶ
posted by jawpakao at 6:59 PM
ုဴၠချနါအျဘကႏာ.ညျ ဘငကချုကႏုဆစျ ဘငကချဳဟဉာ.ညျိၾႁချမ
ဘကဲါု႕လယအၿ့ျနုဴ.ညျုဴၠချ blog ါံျ လ.အျနုအျိၾႁချအက႔ စၚ႔ေ“ု.နု.ညျါု႕စဥကနူတျ ိယၫႁ႑နႊုျန၎.တျ ူတျ်ငကအျအက႔ နုဴ.ညျဘိံျုဴၠချ blog ၎ႁာိံျမ ႅႅ ပတျ စၾငုျ ာငုျါ႑ႁ စႁုျစဤငၠညျ blog ုကဲ ်ငကအျၫႁ႑ုကႏ blog ဘကဲာညျာၢယ ။ငကအျုကႏ ုဆစျာ.ညျါံျ ဘငကချနမချအဴၠချေ.ုကႏ နု.ညျါု႕စဥကူၾငၠညျနမ.ချ န္ဟႁူတျ ဆီႌငဋ.ညျမ ႅႅ
ပ႑ႁလယာွ.ညျါု႕ ွ.ညျူငုျစအျအႁ လယါာဴငၠချေသ ာကုျူငုျေ႔၎ႁါံျ ဆ႑ုျါ႑ႁ ႊၾႁုျ ေ.ူငုျုၿစျ နဆံျနဆၾ့ျိၾႁချ စၚ႔ ေ“ု.နု.ညျါု႕စဥကအႁုကဲ နုက.ႁ စၚ႔ုကႏ နု.ညျါု႕စဥက နႊုျုကႏိယႊႁၾုျါံျ ႊႁၾုျႊ?ယ ့႑ႁါအ.စျုကဲ ာၢယ ဆ႑ုျါ႑ႁႊၾႁုျေ. စၚ႔ုကႏ ာကုျူငုျ၎ႁနမ.ချ ႅႅ အက႔စဴညျ ဆ႑ုျါႁ႑ ႊၾႁုျေ. မာဟ.ချ နု.ညျါု႕စဥက ုကဲ ာိံျမ ႅႅ အက႔ စဴညျ လယတဓဆၿ.ူငုျစအျအႁ ဆ႑ုျါ႑ႁဘငကချဳဟဉါံျနူတျ စႁုျူတျ“အချမ ႅႅ ဆ႑ုျါ႑ႁစူႁချဘ်ငကစျူငုျုကဲ အာျူငုျုကဲါံျ စႁုျူတျုကႏ မ ႅႅ ေအငကချ ါံျ စူႁချဘ်ငကစျညချာၢယ ဆ႑ုျႊၾႁုျႊ?ယါံျ ာချိၾႁချမ ႅႅ ာကုျူငုျေ႔၎ႁ လႁချါ႑ႁိံျ ဘကဲ၏စချ အငကုျမႁချူငုျာ႑႔ါံျ ါ်.ညျနုဴ.ညျိၾႁချမ ႅႅ
၏စ့ျ့ျ၎ႁညုကႏာကုျူငုျေ႔၎ႁ ြကႏ်ာျ။အျိၾႁချ အက႔ ်စျုကႏ ူငုျုၿစျါံျ ာကူငုျုၿစျာ႑႔ာံ စဤငၠညျူတျ ့႑ႁာ.ညျ၎ဲါံျ ဆဴယနုအျ ေနဳဓချ ူဤဉေ႔လင ႅႅ ဘကဲလယအၿ့ျနုဴ.ညျါံျ ညုကႏ ေ႔ နုဴ.ညျူတျ ့႑ႁ်ငကစျအမသ ုကဲနူတျ ာကုျူငုျ၎ႁါံျ ဘ႑႔ာစႁုျ”ဆငၠ့ျ ့ကဲါႁ႑ ဳဟဉ၏စချ ဘၽၠငစျ အာျူငုျာ.ညျိၾႁချနမ.ချ ႅႅ ွါယ ာကေရကဲဘချာ႑႔ာံ ုကႏ ့႑ႁာ.ညျါံျ ဆဴယေနဳဓချလင ႅႅ ့ငကအျၫ႕တဓဆၿ. ူငုျစအျအက႔ နုဴ.ညျဘိံျုဴၠချ ၎ႁ ာိံျမ ႅႅ မႁချနုအျ ိၿ.႔နုဴ.ညျ၎ႁနုအျမ ိၿ.႔ာကုျူငုျေ႔၎ႁါံျ ါႁ႑ူတျဆၾယဆၾယါံျမ နုဴ.ညျာ.ညျႅႅ ိယုကႏခဃ့ျာယာၢယ ညုကႏေ႔ နုဴ.ညျ ့ႁ႑ာ.ညျး.ႁး.ႁမ ႅႅ
အက႔စဴညျ ညုကႏေ႔ါံျ ိံျလယဆၾအျာ႑႔ုကဲာိံျမႅႅ ့ငကအျါံျမ ညုကႏ လယဆၾအျအႁ ာကာငုျါ႑ႁ့ကဲ ာကာငုျါ႑ႁါယ ပတျာငုျါ႑ႁ့ကဲာငုျါ႑ႁႊၾႁုျၫ႑ႁန၎ဓတျ ိံျုဴၠချစၚ႔်ငကအျနအံျ ၫ႕ုကႏ ာကုျူငုျေ႔၎ႁ ႊၾႁုျႊ?ယုကႏ ါအ.စျာၢယ ႊၾႁုျႊ?ယေ.ုကႏနမ.ချ ႅႅ ပတျူဇဉေ.ာၢယနူတျ ဆဴယေနဳဓချႅႅ ာက့ငကအျနမ.ိယ့ကဲာၢယ ညုကႏ ာကုျူငုျေ႔၎ႁ ါ႑ႁုအကႏိံျုဴၠချါံျ ညုကႏ လယာ႑႔ီမျ ါ်.ညျဘိံျူတျအက႔ ။ငကအျေဳငချဆဴယါံျ ိယါဴငၠ့ျါဴ.႔ ဳဟဉစဤငၠညျိၾႁချနမ.ချာိံျမ ႅႅ အက႔စဴညျ စၚ႔ုကႏ ေဳငချရကချန့ချ ။ငကအျေဳငချဆဴယ နုဴ.ညျိၾႁချမ Computer ါံျနူတျ ညုကႏ ၏ိစျဖုက ့႑ႁာ႑႔ုဴယုဴယမ ိယန။အျနုဴ.ညျိၾႁချ စၚ႔ေ“ု.ုနာဴ.ညျာိံျမ ႅႅ ့ငကအျါံျမ ဆဴယေနဳဓချအက႔ ႊစျဆဴယုကႏ ေနဳဓချစဴညျါံျ ိယေ.အျ၎.စဴညျ ႅႅႅ
posted by jawpakao at 4:18 PM